Kugadzira Nyaya Yekutsvagisa Email Kushambadzira Services
Kune vatengesi vanoda kuchera goridhe rakawanda kubva kumapurogiramu avo emaimeri; email yakashambadzirwa kushambadzira iri kukurumidza kuwana mukurumbira.
Kutungamira email kushambadzira kunogona kutora mafomu mazhinji, sekugadzira uye manejimendi ekudzokorora eemail kutaurirana.
Izvo zvinogona zvakare kusanganisira zvemukati kuvandudza, kuyambuka-chiteshi kugovera, rondedzero kukura, pamwe neisinga tsanangurike yehunyanzvi yekubatanidzwa uye nzira dzekuzivisa Chinyorwa chakareba.
Chero zvazvingaitika, kana vatengi vedu vauya kwatiri vachikumbira yakagadzirirwa email services imhaka yekuti ivo Kuora mwoyo uye frugal.
Vakaguta. Ivo havagone kuwana anokwanisa-mumba tarenda kana siphon yekuwedzera kugadzirwa (kana kugona) kubva kune avo varipo vashandi, asi ivo vanoziva vanogona uye vanofanirwa kunge vachiita zvakanyanya.
Izvo zvakajairika. Munzira dzakawanda kushambadzira kweemail idanho rakasiyana. Email yakaoma. Asi mune dzimwe nzira zvinongoda tarenda uye kusimba. Zvakaoma kuwana zvese izvi zvinodiwa mune imwechete sosi kana rakanyanyisa kushanda uye timu isina kudzidziswa.
Outsourcing inoshanda nekuti inobvumidza vashambadziri kuti vapinze mune akasiyana, asi ane hunyanzvi, hunyanzvi hwemumwe wavo ... vangave email email agency kana ESP.
Kunze kwekugadzira, hunyanzvi hwehunyanzvi, uye masimba ekunyengetedza (zvese izvi zvinodiwa kana uchizohwina mutambo weemail), email wekushambadzira naye anounzawo zviitiko zvekushanda neakasiyana vatengi base. Ichi chiitiko chisingaperi chemafungiro matsva ayo anovimbisa kuti kuedza hakuite nyajambwa we "boka kufunga" uye kuti dhora rese rakashandiswa rinowedzerwa.
Pakusarudza kuburitsa yavo yekushambadzira yeemail kana kuichengeta-mumba, vazhinji vedu vatengi vakatanga vatarisa madhora kuti vaone kana zvine musoro. Ivo vanopenga kwete mapenzi.
Ngatizvitarisei izvi, email kushambadzira masevhisi anotora nguva. Saka, mune imwe nzira kana imwe, nguva ndiyo sosi yemubhadharo wemushambadzi.
Ndicho chimwe chezvikonzero nei kutsikisa kunzwisisika; zvinotora nguva shoma.
Nekuda kwechiitiko icho chako cheemaimeri services chinounzwa patafura, hapana zvishoma kune yekudzidzira kodhi, sezvo zvine chekuita nekugona kwavo. Ivo vanonzwawo kudiwa kwekuratidza kukosha kwavo, mwedzi wega wega.
Ini handikwanise kutaura kune ese masangano asi isu tapedza mwedzi nezviso zvedu zvakavigwa mune angangoita ese ESP interface uye API. Tinoziva simba ravo, kusasimba, uye pavasingagone. Isu takagadzira zviuru zvemishandirapamwe uye takapa rubatsiro rwekubvunza kune vazhinji vazhinji vevatengesi veB2C neB2B. Izvi zvinogadzira kugona kunongowanikwa kuburikidza neruzivo. Kubudirira kunoreva nguva shoma, zvinoreva kuti mutengo wakaderera.
Kunze kwekuita basa, kuenderera mberi nedzidzo kunova mari yemupi webasa. Kubhadhara mari, zvekurapa, nguva yezororo? Fugetaboutit.
Mutengo unowanzo kuve wakaderera pane uya wevashandi venguva yakazara, kana zvinoenderana nezvinodiwa, kunyange yakanyanya mari yekuchengetedza inogona kuwanikwa. Zvekare, zvese zvinodzokera kunguva.
Kana ivo vakabuda kunze, rudzii rweiyo ROI iyo mushe angatarisira? Pane imwe chete nzira yekuziva. tanga shanduko uye sarudza zvine hungwaru. Inogona kubhadhara mibairo mikuru kuwana mudiwa anogona kushanda mukonisheni navo kana zvikwata zvavo zvemumba, kana pamwe vangangoda kuburitsa iyo yese email kushambadzira kushambadzira, muto kune nzungu.
Tags: Email MarketingNewsletteroutsourcing
SaaS Shanduko yekupa Dhatabhesi seSevhisi
Maitiro Ekufungidzira Yako Inotevera Webhu Purojekiti
Jun 1, 2010 pa 12: 08 PM
Yakanaka posvo, Scott. Tarisa uone ichi chinyorwa kune zvimwezve zvikonzero nei kuburitsa email kunzwisisika: http://lunchpail.knotice.com/2010/05/28/why-outsourcing-email-makes-sense/